Shirkadaha Shidaal Baadhista Ka Wada Somaliland Oo Ku Hanjabey In Ay Dalka Ka Bixi Doonan Iyo Wasiirka Macdanta Oo Cabsho Ka Dhan Ah Wasiiro Hor Dhigay Siilanyo |
Shirkadaha Shidaal Baadhista Ka Wada Somaliland Oo Ku Hanjabey In Ay Dalka Ka Bixi Doonan Iyo Wasiirka Macdanta Oo Cabsho Ka Dhan Ah Wasiiro Hor Dhigay Siilanyo
Hargeisa(GNN):-Shirkii Golaha Wasiiradda ee Khamiistii ayaa laga dooday arrin halis ku ah sahaminta
Shiidaalku inay ka sii socoto dalka, gaar ahaan Oodweyne, taasoo la soo bandhigay inay masuuliyiin xukuumadda ka tirsani jilaafooyin ay ku hor istaagayaan mashruuca ay u dhigeen. Wasiirka wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Xuseen Cali Ducaale ayey wararka aanu ka helnay kulankii khamiistu sheegayaan in uu Madaxweynaha u bandhigay Raxan wasiiro ah iyo xildhibaano caqabad ku ah sahanka Shiidaalka, kuwaas oo uu sheegay inay si toos ah dhaqaale iyo talo-ba ugu bixiyey in la fashiliyo mashruuca Sahanka Shiidaalka.
Wasiirku waxa uu shirka hor dhigay in wasiiradda ugu tunka weyn ee ka arrimiya Madaxtooyadda Somaliland qaarkood ay arrintan gacan toos ah ku leeyihiin, isla markaana ay ku taageersan yihiin Xildhibaano awood ku leh talada Madaxtooyadda, kuwaas oo isku kaashaday Kicinta iyo abaabulka dadka deegaanka.
Wasiir Xuseen ayaa Madaxweynaha u bandhigay cabasho kaga timi shirkadda Shiinaha ah ee fulinaysa Sahanka, taasoo uu sheegay inay dalka ka bixi doonto haddii aanay xukuumaddu diyaar u ahayn ama aanay kala shaqaynayn xasilinta deegaamadda ay hawshu ka socoto. Shirkadda shiinaha ah ayaa ku hanjabtay inay ka guurayso Dalka, haddii aan jawaab deg deg ah laga siinin caqabadaha ay ku hayso isla masuuliyiinta xukuumaddu, kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay iyagu kacdoonada qaybta ugu wayn hurinayaan.
Golaha wasiiradda ayaa la sheegay inay arrintani ka dhex abuurtay Dood culus, waxaanay sababtay ugu danbayntii in Madaxweynaha iyo Goluhuba isku raaceen in talaabo deg deg ah laga qaado cabashada Wasiirka iyo shirkadda. Shirka ayaa lagu go’aamiyey saddex cisho gudahood in lagu dhamaystiro fulinta sahanka shiidaalka ee ka xaniban Oodweyne, waxaanu Madaxweynuhu amray in la geeyo ciidan Milatari oo awood ku meel mariya hawsha, isla markaana suga Amaanka deegaamadda hawshu ka socoto.
Sahanka shiidaalka ayey hore xukuumadda Somaliland u fashilisay kadib markii ay masuuliyiinta xukuumaddu iyagu u soo galeen deegaamadda hawshu ka socoto, iyagoo ku gabanaya dadweynaha ay ka soo jeedaan, sida imikana ku dhacday sahankan cusub oo ay Xukuumadda Somaliland gadh-wadeenka ka tahay.
Wasiiradda caqabada ku ah sahankan danbe ee Golaha fadhiyey waxa ka mid ah wasiiradda ka soo jeeda Deegaamadda ay hawsha Sahanka Shiidaalku ka socoto, marka laga reebo xubno kooban, kuwaas oo iyagu daacad ka ah, hase yeeshee waxa kaga awood batay wasiiradda iyo xildhibaanada hawshan diidan oo ka soo jeeda Barriga iyo Galbeedka Burco.
Wasiiradda iyo Xildhibaanada hawshan ka soo horjeeda ayaa ku sababaynaya in ay helaan dhaqaale sida mashaariicda kale ee ay xukuumaddu dhaqaalaha ku bixiso, sida DP World iyo Saldhiga Madaarka Berbera, kuwaas oo ay u arkaan wasiiradda iyo dadka madaxtooyadda ka ag dhaw ee maamulayaa inay faraqa ka buuxdsadeen lacago iyo mashaariic kala duwan.